Kooxda Liverpool oo aan weli ka harin hiigsiga hanasha horyaalka kaddib guul ay ka gartay Burnley.. + Sawirro – Gool FM
Kooxda Liverpool oo aan weli ka harin hiigsiga hanasha horyaalka kaddib guul ay ka gartay Burnley.. + Sawirro
( Premier League ) 9 MAR 2019 kooxda Liverpool ayaa guul muhiim ah ka gaartay kooxda Burnley kulan ka tirsan horyaalka Premier League , ciyaarta ayaana ku soo dhamaaday (4-2 )
Qeebtii koowaad ee kulanka ayaa ahaa mid aad uxiiso badan kooxda Liverpool ayaana soo bandhigtay qaab ciyaareed aad u wanaagsan wallow bilowgii hore ee ciyaarta laga dhaliyey gool.
Daqiiqadii 6-aad ee ciyaarta Westwood ayaa gool ka dhaliyey kooxda Liverpool balse ugu dambeen Liverpool ayaa la timid goolka bareejada waxaana u dhaliyey Firmino waxaana goolkaas ka caawaiyey Salah.
Reds ayaa daqiiqado un yar kaddib heshay gool labaad waxaana goolkaas u dhaliyey laacibkooda reer Sinagal ee Mane , natiijada ciyaarta ayaana noqotay (2-1).
Qeebtii koowaad ee kulanka ayaa ku soo dhamaaday liverpool oo ku horkeceysa labo gool , nasiino kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambe ee ciyaarta kooxda Liverpool ayaana ku soo gashay dar dar hor leh.
Laacibka reer Barazil ee Firmino oo kulankan ka dhex muuqday ayaa markale gaaray shabaqa kooxda Burnley daqiiqadii 67-aad ee ciyaarta .
Liverpool ayaa gool lowga naxsaday daqiiqadiihii dheeriga ee ciyaarta lagu daray waxaana gool ka dhaliyey Gudmundsson balse Mane ayaa quusiyey rajadii Kooxda Burnley isaga oona ciyaarta ka dhigay ( 4-2)
Ugu dambeen ciyaarta ayaa ku dhamaatay (4-2) liverpool ayaa u safri doonta kooxda Bayer bartamaha todobaadkan kulanka lugta labaad ee tartanka Champions League wareegiisa 16-ka.
Philippe Coutinho oo diyaar u ah inuu xagaagan ku biiro Manchester United, isagoo la hadlay qaar ka mid ah xiddigaha kooxda!
Imise lacag ah ayey Man United siin doontaa Ole Gunnar Solskjaer haddii ay ka dhiganayso Tababaraheeda joogtada ah?